လက်ရှိတွင် Harvard University ၊ Stanford University ၊ Nanyang Technological University Singapore ၊ Imperial College London နှင့် University of Sydney စသည့်အထင်ကရကျောင်းများအပါအဝင် ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ ကျောင်းပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်တွင် UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍, ၍ ကျောင်းလခပေးသွင်းခြင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ ကျောင်းအချို့ရှိ အော့ဖ်လိုင်း POS စက်များတွင်လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ကျောင်းလခပေးသွင်းခြင်း၊ ဖတ်စာအုပ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် အဆောင်လခပေးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။.
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပညာတော်သင်ရင်း UnionPay ကတ် (62 နှင့်စသော ကတ်နံပါတ်များ) ကို ဆောင်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ကျောင်း၌ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝတွင်ဖြစ်စေ၊ သွားလာ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးတွင်ဖြစ်စေ UnionPay ကတ်သည် လုံခြုံမှုရှိသော၊ လွယ်ကူအဆင်ပြေသော၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော .
သုံးနိုင်သည် ကျောင်း ၁၄၀၀ ကျော်မှာ
အဆိုပါပလက်ဖောင်း လွှမ်းခြုံထားသည့်ကျောင်းတိုင်း၌ UnionPay ကတ်ဖြင့် ကျောင်းလခအား နယ်စည်းဖြတ်ကျော်၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ဝင်ရောက်၍ www.flywire.comစာရင်းသွင်းပြီးနောက် ကျောင်းလခ ပေးသွင်းရမည့်ကျောင်းအား ရွေးချယ်ပါ။ ကျောင်းသားအချက်အလက်များနှင့် ငွေပေးချေရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ပြီးပါက အမှာစာဖြစ်ပေါ်လာပြီး “UnionPay Online Payment” စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိသွားမည်။ ထို့နောက် UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။.Flywire မှ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအား စစ်ဆေးနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးသဖြင့် ဘဏ်စာရင်းတွင်းသို့ ငွေပေးသွင်းမှု အချိန်မီရောက်ရှိရန် အာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။
ကျာ်မှာကျောင်း ၉၀၀ သုံးနိုင်သည်။.
အဆိုပါပလက်ဖောင်း လွှမ်းခြုံထားသည့်ကျောင်းတိုင်း၌ UnionPay ကတ်ဖြင့် ကျောင်းလခအား နယ်စည်းဖြတ်ကျော်၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။.
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်၍ www.paytuitionnow.com ကျောင်းလခပေးသွင်းရမည့် ကျောင်းအား ရွေးချယ်ပါ။ ကျောင်းသားနှင့် ငွေပေးချေသူ၏ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် Western Union မှပေးအပ်သည့် ငွေလွှဲရန် နံပါတ်အား ဖြည့်စွက်ပြီးပါက “UnionPay Online Payment” စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိသွားမည်။ ထို့နောက် UnionPay ကတ်နံပါတ်အား ရိုက်ထည့်၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
၉၀% နီးပါးမှာ သုံးနိုင်သဖြင့် ထိုင်ဝမ်ရှိ စက်မှုလက်မှုကောလိပ်
UnionPay ကတ်ဖြင့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျောင်းလခပေးချေမှုကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။
Bank of Taiwan SAR（https://school.bot.com.tw）
Taiwan SAR Cooperative Bank（https://ars.tcb-bank.com.tw）
Chang Hwa Bank（https://school.chb.com.tw）ကျောင်းလခပေးသွင်းနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းများသို့ ဝင်ရောက်၍ ထိုင်ဝမ်ရှိ စက်မှု လက်မှုကောလိပ် ၉၀% နီးပါး၌ UnionPay ကတ်ဖြင့် ကျောင်းလခအား အွန်လိုင်း မှတစ်ဆင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းလခပေးသွင်းရန်ဖောင်၌ ပါရှိသည့်အတိုင်း ငွေအထွက်နံပါတ် နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ငွေပေးချေသည့် စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်၍ “UnionPay Online Payment” မှတစ်ဆင့် ငွေပေးသွင်းနိုင်သည်။
သြစတြေးလျရှိ အဆင့်မြင့်ကျောင်းများ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းများနှင့် ကောလိပ်များ အားလုံးမှာ သုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါပလက်ဖောင်းလွှမ်းခြုံထားသည့် ကျောင်းအားလုံး၌ UnionPay ကတ်ဖြင့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျောင်းလခပေးချေနိုင်ပါသည်။.
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်၍ စာရင်းသွင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ကျောင်းသားနှင့် ငွေပေးချေသူ၏www.iedupay.com ကျောင်းလခပေးသွင်းရမည့် ကျောင်းအား ရွေးချယ်ပြီးနောက် “UnionPay Online Payment” စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်၍ UnionPay ကတ်နံပါတ်အား ရိုက်ထည့်ကာ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ပြီးပါက ငွေပေးချေကြောင်း အတည်ပြုသည့် အီးမေးလ်အား လက်ခံရရှိပါမည်။.
UnionPay ကတ်ကိုင်ဆောင်သူသည် ဆစ်ဒနီ၊ မဲလ်ဘုန်း၊ အက်ဒလိတ်မြို့တို့ရှိ www.aoji.cnAOJI ပညာရေးရုံးခန်းတို့၌လည်း UnionPay ကတ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ကျော်မှာ သုံးနိုင်သည် ကျောင်း ၇၀၀.
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် TMS နှင့် TouchNet လက်အောက်ရှိ ကျောင်းပေါင်း ၇၀၀ ကျော်တွင် UnionPay ကတ်ကို လက်ခံသုံးစွဲရာ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းများ၏ ငွေပေးသွင်းသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်၍ UnionPay credit cards ဖြင့် ကျောင်းလခပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ University of Hong Kong SAR ၊ Chinese University of Hong Kong SAR ၊ Lingnan University ၊ Hong Kong SAR Shue Yan University ၊ The Language School of University of New South Wales Australia နှင့် University of Auckland New Zealand စသည့်ကျောင်းများရှိ ငွေကြေးပေးသွင်းသည့်ပလက်ဖောင်း၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ အထင်ကရကျောင်းပေါင်း ရာနှင့်ချီမှာ သုံးနိုင်သည် .
စင်ကာပူရှိ Nanyang Technological University အပါအဝင် ဒေသခံကျောင်းပေါင်း ၈၀ နီးပါးရှိ POS စက်များ၌ UnionPay ကတ်များအသုံးပြု၍ ကျောင်းလခနှင့် အဆောင်လခ တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုရှိ အထင်ကရတက္ကသိုလ် ၆ ခု၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ဟောပြောပွဲတက်ရောက်ရန် အမည်စာရင်းသွင်းခနှင့် စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ သြစတြေးလျရှိ Macquarie University ၊ University of Wollongong စသဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် တက္ကသိုလ် ၂၀၀ ကျော်၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ကျောင်းလခပေးသွင်းခြင်း၊ ဖတ်စာအုပ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် အဆောင်လခပေးသွင်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။.
အမေရိကန်၌ Columbia University နှင့် New York University စသည့် တရုတ်ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများ အများဆုံးတက်ရောက်ကြသည့် အဆင့်မြင့် ကျောင်း ၂၀ ကျော်ရှိ ကျောင်းဝန်းထဲ၌ဖွင့်လှစ်ထားသော စာအုပ်ဆိုင်များတွင် UnionPay credit cards အား အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်တွင် ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်နိုင်ငံတို့မှ အဆင့်မြင့်ကျောင်း ၇၀ ကျော်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အလယ်တန်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများရှိ POS စက်များတွင် UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ကျောင်းလခပေးသွင်းနိုင်သည်။ University of Manchester ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုဌာန၊ University of Bath ကျောင်းသားအဆောင်၊ Coventry University ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုဌာန၊ University of Plymouth စာကြည့်တိုက် တို့၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုဒေသ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကျောင်းသားများသည် UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ University of Hong Kong SAR ၊ the Chinese University of Hong Kong SAR ၊ Hong Kong SAR Baptist University ၊ the Open University of Hong Kong SAR နှင့် Hong Kong SAR Shue Yan University စသည့် အထင်ကရအဆင့်မြင့်ကျောင်းများ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကျောင်းလခမှအပ အခြားအခကြေးငွေများကိုလည်း ပေးသွင်းနိုင်သည်။.
ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုဒေသရှိ ကုန်သည်များနှင့် ATM စက်များအားလုံးနီးပါး၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ SOGO Hong Kong SAR ၊ 7-11 ၊ Sasa နှင့် Mannings စသည့် နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်သည့် ကုန်သည်များ၌လည်း UnionPay mobile ဖြင့် လျင်မြန်စွာငွေပေးချေနိုင်သည်။.
Iထိုင်ဝမ်ရှိ ကျောင်း ၁၁၇ ခုတွင် UnionPay ကတ် လက်ခံအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ရာ National Taiwan SAR University ၊ Ming Chuan University ၊ Shih Chien University ၊ Tamkang University ၊ Chung Yuan Christian University ၊ Feng Chia University ၊ Tunghai University နှင့် Providence University တို့အပါအဝင် ဒေသခံကျောင်းများ၏ ၉၀% အား လွှမ်းခြုံထားပါသည်။
ထိုင်ဝမ်ရှိ ATM စက်အားလုံးနီးပါးနှင့် စားရေးသောက်ရေး၊ နေထိုင်သွားလာရေး၊ ခရီးသွားလာရေး၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်သည့် ကုန်သည်အများစု၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ “Jinmapeng” ဒေသအပါအဝင် ဒေသထွက်ကုန် စားကောင်းသောက်ဖွယ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်ခွဲများ စသည့်ဈေးဆိုင်များစွာ၌ လည်း UnionPay mobile ဖြင့် လျင်မြန်စွာငွေပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။.
စင်ကာပူရှိ PSB Academy ၊ MDIS ၊ Kaplan ၊ INSEAD စသည့် ဆယ်နှင့်ချီသော ပုဂ္ဂလိကအဆင့်မြင့်ကျောင်းများ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ .
စင်ကာပူရှိ ATM စက်အားလုံးနီးပါးနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာ၊ Branded အမှတ်တံဆိပ်သီးသန့် အရောင်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ Shaw Brothers ရုပ်ရှင်ရုံ၊ Singapore Petroleum ၊ Sheng Siong ၊ Kinokuniya နှင့် Peach Garden ခေါက်ဆွဲဆိုင် စသည့်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲသည့်နေရာ ၈၀% နှင့်အထက်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲသည့်နေရာများစွာ၌ လည်း UnionPay mobile ဖြင့် လျင်မြန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ UnionPay ကတ်ဖြင့်ငွေသုံးစွဲရာ၌ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်သုံးစွဲပါက လက်မှတ်ရေးထိုးရန်မလိုအပ်ဘဲ တိုက်ရိုက် “ကတ်ဖြင့်ထိတွေ့၍” ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။.
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ University of Southern California ၊ Columbia University နှင့် New York University စသည့် တရုတ်ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများ အများဆုံး တက်ရောက်ကြသည့် အဆင့်မြင့်ကျောင်း ၂၅ ကျောင်းခန့်ရှိ ကျောင်းတွင်းစာအုပ်ဆိုင်များ၌ UnionPay credit cards ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကနေဒါရှိ အဆင့်မြင့်ကျောင်း ဆယ်နှင့်ချီ၌ UnionPay ကတ်ဖြင့် ကျောင်းလခအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နယ်စည်းဖြတ်ကျော်၍ ပေးချေနိုင်ပါသည်။ .
အမေရိကန်ရှိ ATM စက်အားလုံးနီးပါး၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒေသခံအထင်ကရဈေးဝယ်ကုန်တိုက်၊ စူပါမားကတ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်စသည့် ငွေကြေးသုံးစွဲသည့်နေရာ ၈၀% ၌ UnionPay credit cards လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်သည်။ ကနေဒါရှိ ATM စက် ၈၅% နှင့် ကုန်သည် ၁ သိန်းကျော်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲသည့်နေရာအချို့၌လည်း UnionPay mobile ဖြင့် လျင်မြန်စွာငွေပေးချေနိုင်ပါသ.
ဗြိတိန်ရှိ The Imperial College London ၊ the University of Manchester ၊ the University of Nottingham ၊ University of Southampton ၊ Coventry University ၊ Plymouth University ၊ University of Bath ၊ Clifton College Bristol နှင့် Kingston College စသဖြင့် ကျောင်း ၂၀ ခန့်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ အော့ဖ်လိုင်း ကျောင်းလခပေးချေမှု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ University of Manchester ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုစင်တာ၊ University of Bath ကျောင်းသားအဆောင်၊ Coventry University ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုစင်တာ၊ Aberystwyth University နှင့် Plymouth University ရှိစာကြည့်တိုက် စသည့်နေရာများ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။.
ဗြိတိန်ရှိ ATM စက်အများစု၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒေသခံအထင်ကရဈေးဝယ်ကုန်တိုက်များ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီနိုင်ငံရေးကောလိပ်၊ ပါရီ 13-IUT VILLETANEUSE ၊ University of Lyon ၊ CNAM ၊ Universitye of CAEN ၊ University of CERGY ၊ IPAG နှင့် KEDGE စသည့်ကျောင်းများရှိ POS စက်များ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ALLIANCE FRANCAISE ၊ CFILC PARIS နှင့် UCO/CIDEF စသည့်ဘာသာစကားသင်တန်ကျောင်းများရှိ POS စက်များ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
ပြင်သစ်ရှိ ATM စက် ၇၀% ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပြီး ATM စက်အချို့ ဖန်သားပြင်၌ တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒေသခံ ကုန်သည် ၁၃၀၀၀၀ ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Avenue des Champs – Elysées ၊ Vendôme ရင်ပြင်နှင့် Charles De Gaulle လေဆိပ်၊ Louvre ၊ Versailles ၊ Orsay ၊ Picasso နှင့် Parc de l’Orangerie စသည့်ပြတိုက်များမှ စာအုပ်များနှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၌လည်း UnionPay ကတ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
စပိန်နိုင်ငံရှိ အထင်ကရစီးပွားရေးကျောင်းများဖြစ်သည့် Instituto de Empresa ၊ ESADE နှင့် IESE ၊ Universidad Politécnica de Madrid စသည့်အဆင့်မြင့်ကျောင်းများ၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ၊ အလယ်တန်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း ၄၀ ကျော်၌ UnionPay ကတ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
စပိန်နိုင်ငံရှိ အရောင်းဆိုင် ၇၀% ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာ စသည့်မြို့များ၌ ကတ်အသုံးပြုမှု အထူးအဆင်ပြေလွယ်ကူလှသည်။ ကုန်သည်များနှင့် ATM စက် ၈၀% ကျော်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် စပိန်ရှိ အငှားယာဉ် ၇၀% ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။.
အီတလီနိုင်ငံ Bocconi University ၊ Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) စသည့် အဆင့်မြင့်ကျောင်းနှင့် ဘာသာစကားသင်ကြားရေးစင်တာ ၄၀ ကျော်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ အော့ဖ်လိုင်း ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ရောမ၊ မီလန်၊ ဗင်းနစ်၊ ဘိုလိုနာ၊ ဖလောရင့်စ် နှင့် တူရင်းမြို့များ၌ ထိုကဲ့သို့ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
အီတလီနိုင်ငံရှိ ATM စက် ၈၀% အထက်နှင့် အရောင်းဆိုင် ၄၅၀၀၀၀ ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.
သြစတြေးလျနိုင်ငံ University of Melbourne ၊ the University of Sydney ၊ Monash University ၊ the University of Queensland ၊ Macquarie University ၊ Swinburne University of Technology နှင့် Deakin University အပါအဝင် အထင်ကရအဆင့်မြင့်ကျောင်း၊ ဘာသာစကားကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း စသည့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့အသုံးပြုနိုင်မည့်နေရာများမှာ ကျောင်းဝန်းတွင်းရှိ စာအုပ်ဆိုင်၊ ကျောင်းသားစူပါမားကတ်၊ စာကြည့်တိုက် စသည့်နေရာများ ပါဝင်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ University of Auckland ရှိ POS စက်များ၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။.
သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ATM စက် ၉၀% နှင့် အရောင်းဆိုင် ၇၀% ၌ UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းဒေသရှိ အကြီးဆုံးစူပါမားကတ်ဆိုင်ခွဲ Woolworths အပါအဝင် UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရောင်းဆိုင်များ၏ ၆၀% ၌ UnionPay mobile ဖြင့် မြန်ဆန်စွာငွေပေးချေနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်ရှိ ATM စက် ၇၅% နှင့် အရောင်းဆိုင် ၂၀၀၀၀ ကျော်၌လည်း UnionPay ကတ်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
လုံခြုံချောမွေ့လွယ်ကူ၍ မြန်ဆန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း
UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ နယ်စည်းဖြတ်ကျော်ကာ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျောင်းလခပေးချေနိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ လွယ်ကူမြန်ဆန်လှပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်တက်ရက် ၃ ရက်အတွင်း ငွေအရောက်ပေးချေနိုင်ပြီး ငွေပေးသွင်းသည့်နေရာ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့၍ လုံခြုံမှုရှိပါသည်။.
အချိန်မရွေး ငွေသားထုတ်ယူနိုင်၍ လွယ်ကူစွာငွေသုံးစွဲနိုင်ခြင်း
UnionPay ကတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပညာတော်သင်သွားရောက်သည့်နေရာရှိ ATM စက်များမှ လွယ်ကူစွာ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပြီး ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများ၏ နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သဖြင့် ပင်လယ်ရပ်ခြားသို့ ငွေသားများစွာယူဆောင်သွားရသည့်ဒုက္ခကို လျှော့ချပေးပါသည်။ .
ATM အကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
တရုတ်ယွမ်ငွေဖြင့် ငွေနှုတ်ယူသဖြင့် ငွေအရင်းအနှီး ပိုမိုနည်းပါးခြင်း
UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ကျောင်းလခပေးသွင်းစဉ် ဘဏ်စာရင်းမှ တရုတ်ယွမ်ငွေဖြင့် နှုတ်ယူသဖြင့် ငွေကြေးလဲလှယ်သည့်အဖိုးအခ မကုန်ကျတော့ပေ။.
ပင်လယ်ရပ်ခြား၌ ငွေသုံးစွဲ၍ ပြည်တွင်း၌ ငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်း
UnionPay ကတ်အသုံးပြု၍ ပင်လယ်ရပ်ခြား၌ ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် အုပ်ထိန်းသူများမှ ဘဏ်စာရင်းအပြောင်းအလဲကို အချိန်မရွေးသိရှိနိုင်ပြီး Credit card ကုန်ကျငွေစာရင်းကို ပြည်တွင်း၌ တရုတ်ယွမ်ငွေဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကတ်အသုံးလွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့ ပြီး
ကတ်အသုံးပြုသူစိတ်တိုင်းကျမည့် ဆိုင်တိုင်းတွင် ငွေပေးချေနိုင်သည့်အပြင် တကမ လုံးရှိဆိုင်တိုင်းတွင် discount များ ရရှိနိုင်ခြင်း ပြု၍ လွယ်ကူချောမွေ့သောခံစားခွင့်များ ရရှိခြင်း.
ပြည်တွင်း၌ ကတ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခြင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၄၀ ကျော်၌ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများသည် UnionPay ကတ်ပြုလုပ်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၆၈ ခု၌ လုံခြုံချောမွေ့သော ငွေပေးချေရေးဝန်ဆောင်မှုကို လက်တွေ့ခံစားနိုင်ပြီး အထူးခံစားခွင့်ကို ခံစားနိုင်ပါသည်။.